Sebenzisa iMedia yokuNxibelelana ukukhulisa i-B2C yakho yokunyusa | Martech Zone
Sebenzisa iMithombo yeendaba eSebenzayo ukukhulisa i-B2C yakho yokunyusa
NgoLwesine, uJuni 16, 2016 NgoLwesine, uJuni 16, 2016 U-Muhammad Yasin
Nokuba yeyiphi na imboni okuyo, ukuba ishishini lakho likwicandelo le-B2C, amathuba mahle kakhulu ukuba ujongene nokhuphiswano olunobukrakra- ngakumbi ukuba uyivenkile yezitena nodaka. Emva kwakho konke, uyazi ukuba bangaphi kwaye kaninzi kangakanani abathengi bathenga kwi-intanethi namhlanje. Iintsapho zisaya kwizitena kunye nakwiivenkile zodaka; kodwa uncedo lokuthenga kwi-Intanethi lenze ukuba inani labathengisi abasesitolo lihle. Enye yeendlela ezenziwa ngayo amashishini ukuzama ukulungisa oku kukwenza ukukhushulwa -Amatikiti, uluhlu lwempahla olutsha, izaphulelo ezinkulu, njl. Kwakhona, nangona abo sikhuphisana nabo sixoxe nabo baqhuba unyuselo oluhehayo…. ukuba ayitsaleli ngakumbi kuneyakho.
Kule mihla, unyuselo olwenziwa ngamashishini alwanele ukuqhuba kugcino lweevenkile okanye ukuthengwa kwe-Intanethi. Abo bakhuphisana nabo kusenokwenzeka ukuba basebenzise ezinye izinyuselo ezifanayo-ngamanye amaxesha ngaxeshanye. Oko kwathethileyo, abathengi abaninzi bazakusebenzisa "ukulungelwa" njengendawo yokuthatha isigqibo sokuba bayahamba okanye bangayi kwindawo yakho: inokuthenjwa ngokusekwe kuphononongo lwe-Intanethi, kufutshane nendlu yakho (ukuba isitena kunye nendawo yokugcina izinto), ingcebiso evela kumhlobo ( ukunqanda uphando) kunye namava (kunye neli ziko) zezona zinto zixhaphakileyo ekuthathweni kwesigqibo. Ngamafutshane, unyuselo lwakho kufuneka lubalasele.
Ukuze unyuselwe uphawu lwegama lakho, kuyacaca ukuba kufuneka wenze into eyahlukileyo. Enye yeendlela ezilungileyo zokwenza oku kukudibanisa amava asebenzisanayo kwiwebhusayithi yakho yophawu. Amava okunxibelelana abalulekile kuba avumela ii-brand ithuba lokubonelela ngesikhokelo esibalulekileyo, okanye izigqibo zokuthenga ze-BIG. Ikwabonelela ngeentengiso ithuba lokonwabisa abathengi babo. Nazi ezinye iindlela zokukhetha amava onokuthi uwahlanganise kwiwebhusayithi yakho ukuze wandise ukubandakanyeka, kwaye ekugqibeleni, ukonyuse uguquko.
Kumashishini athengisa "izinto ezigabadeleyo" kunye neenkonzo ezihlala zifuna ukucinga kakhulu (iimoto, ifanitshala, izinto ezibambekayo, njl. Njl.), Iikhalityhuleyitha sisiqwenga somxholo esinokuhambisa abathengi bakho kwizigqibo ezifanelekileyo zokuthenga. Amaxesha ngamaxesha, nabona bantu baninzi abanemali nabazinzileyo kufuneka bathathe inyathelo ukubuyela umva ukuze babone ukuba banakho kwaye abanako ukufikelela kuko. Ezinye zeekhaltyhuleyitha eziqhelekileyo esizibonayo zezi: Iikhalityhuleyitha zokuhlawula zarhoqo ngenyanga, izixhobo zokubala inzala kunye nezixhobo zokubala ezihlawulelwayo.
Ewe kunjalo, imali ayisosizathu sodwa sokufuna ikhalityhuleyitha. Abathengi bakho banokufuna ukubala ukuba bangakanani na indawo abanayo yokulala esofeni. Okanye, abathengi bakho banokufuna ukubala ubungakanani bomzimba wabo, okanye ubunzima babo obulungileyo, ukuze babone ukuba yeyiphi na inkqubo efanelekileyo kubo. Inqaku apha kukuba iicalculator zenza izigqibo ngokulula, kuba zibonelela ngamaxabiso amanani athile kwizinto ezithile. Kungcono inani (nokuba liphezulu okanye lisezantsi), elona xesha lilungileyo umthengi efumana impendulo ngalo-kwaye oko kukhokelela ekunyuseni iinjongo zokuthenga.
Iikhalityhuleyitha zingangqina ziluncedo olukhulu kubathengi abajonge ukuthatha inxaxheba kwezonyuselo lwangoku. Nangona iikhaltyuleyitha zinokusetyenziswa nangaliphi na ixesha, ukukwazi ukufumana iimpendulo kwimibuzo ebalulekileyo kuyazityhala ezantsi xa kuthengwa ifanele. Okukhona besazi malunga nemeko yabo ethile, kokukhona bathambekele ngakumbi ekuthengeni. Kwaye ukuba kukho ukunyusa okuqhubekayo (masithi, "Akukho Ntlawulo kude kube ngo-2017"), umthengi uya kuzama ukubala ukuba anganakho na ukufikelela kwixesha elizayo ngaphambi kokwenza ukuzibophelela okunjalo. Nje ukuba baphendule, baya kuthenga.
Ngamanye amaxesha ukungazinzisi komthengi akuhambelani nemali (okanye ukubala okuthile); kodwa kunoko, ukhetho olunyulu. Xa abathengi beziswa ngeendlela ezininzi ezintle (eziqheleke kakhulu ngexesha lokunyusa), ngamanye amaxesha bayathintelwa sisakhono sokuthatha isigqibo. Kuvakala ngathi bubudenge, kodwa kuyinyani ngokupheleleyo. Abanye abathengi baya kuyeka nje ukuba abakwazi ukuza kwisigqibo sokuthenga-ngakumbi ukuba kukuthenga okukhulu. Ukuba umboleki akazinzanga ngokupheleleyo kwinto ethile, ingcinga yakhe ithi “Kulungile, akufuneki ukuba ibeyinto entle ngelo xesha. Kutheni ndizakuchitha inkcitho eninzi ukuba ndibiyile ngocingo? ” emva koko baqhubeke.
Amava ovavanyo yenye yeendlela ezilungileyo zokwenza ukuba abathengi bakho baqhubeke phantsi nokuthenga ifanele-ngakumbi xa kufikwa kunyuselo lwakho kwi-Intanethi. Ngenxa yokuba unyuselo luqulathe ukhetho oluthile lweemveliso, iinkonzo okanye unikezelo, uvavanyo lunokukhokelela abathengi kwenye yeendlela ezikhoyo.
Masisebenzise amaqela okuzenzekelayo njengomzekelo. Njengoko usenokuba uyazi, amaqela ezithuthi aqukethe iindawo ezininzi zokuthengisa kwindawo ethile; kwaye umthengisi ngamnye uthengisa uhlobo olunye lwesithuthi (iToyota, iKia, iHyundai, njl.njl.). Masithi umthengi uvile izinto ezintle ngeli qela lezithuthi; Kwaye bonke abathengisi (kwiqela leemoto) bathatha inxaxheba kukhuthazo "Akukho Ntlawulo kude kube ngo-2017". Konke kuvakala kakuhle kwaye kulungile… de ufumanise ukuba umthengi akaqinisekanga kwaphela ukuba loluphi uhlobo / lwesithuthi afuna ukuhamba naso. Ukugcina loo mthengi angayi komnye umthengisi, iqela elizenzekelayo linokubeka uvavanyo kwiwebhusayithi yalo ukubakhokelela kwisigqibo sokuthenga. Uhlobo olufanelekileyo lovavanyo inokuba lolunika "umfuziselo / umfuziselo" umthengi ngokusekwe kwiimpendulo ezinikezelwa ngumthengi- "luhlobo luni lwemoto ekufuneka uqhube ngalo?" uvavanyo.
Enye yeendlela ezilungileyo zokufumana amava asebenzisanayo kunyuselo lwakho kukwenza amava akho asebenzisanayo ukuba abe kukukhuthaza. Nokuba yeyiphi enye intengiso oqhubayo, unokubakhuthaza abathengi ukuba batyelele ivenkile yakho (okanye iwebhusayithi) ngomdlalo we-Instant Win-unika ithuba lokuphumelela ibhaso le-BIG, kwaye unike izibonelelo okanye amabhaso okuthuthuzela abantu abangawenziyo Phumelela iJackpot. La mava anokubandakanya: oomatshini bendawo edijithali, iivili ezijikelezayo zokuphumelela (ezinjengevili lethamsanqa) okanye amanye amava akhethiweyo akhetha ibhaso elinye, eliphumeleleyo. Amanye amabhaso okanye ukubonelelwa (okunokukhankanywa ngaphambi kokuthatha inxaxheba) kunokuba yinto exabisekileyo njengothethwano lwasimahla, akukho ntlawulo zenyanga, imali ezantsi, okanye i- $ 100 ekuthengeni i- $ 800 okanye ngaphezulu. Elona candelo lililo kukuba ezi ntlobo zamava zibandakanyeka kakhulu, kuba zikhulisa ukonwaba kwaye kunqabile ukuba zikhokelele ekucaphukeni okanye kuphazamise abathengi. Inyaniso yokuba bayonwaba kwaye "bayaphumelela" into eyenza ukuba ibe luhlobo oluhle lwamava okusebenzisana- kuxhomekeke kumzi mveliso, kunjalo.
Uhlobo lokugqibela lwamava endisebenzisanayo ndiza kuhamba kuwo “yimibuzo.” Nangona iikhwizi zingahlali zibonelela ngento enexabiso elibonakalayo (ngexabiso elibonakalayo, ndithetha impendulo, isithembiso okanye ibhaso), banokubashiya abathengi benemvakalelo yolwaneliseko. Ngokubanzi, xa abathengi baziva bonwabile okanye benekratshi ngeziqu zabo, baya kubaxelela abahlobo babo. Kwimeko yemibuzo (ngohlobo lwamava asebenzisanayo), abathengi baya kutyekela ekwabelaneni ngeziphumo zabo kwimidiya yoluntu-kwaye bade bacele umngeni kubo. Kwakhona, nangona kungekho sibonelelo "sibambekayo", ezi ntlobo zamava ziyamangalisa ukwenza uphawu. Okukhona imibuzo isenza umdla wokufuna ukwazi umthengi, kokukhona kusaziwa ngakumbi ukuba uphawu luye luba-kwaye baya kuba nolwazi ngakumbi ngalo. Ukuya kuthi ga kunyuselo, imibuzo oyibuzayo kuloo mibuzo Ungabonisa umxholo wentengiso ekwi-Intanethi -Into eqhubeka ikhupha ulwazi lomthengi.
Yeyiphi kwezi ntlobo zamava ezinokuba luncedo kakhulu kwishishini lakho? Sixelele kwizimvo ezingezantsi!
tags: amava entengisoUnxibelelwano lwabathengiUkuThengiswa kweMpahlaumxholo wee-interactiveImithombo yeendaba yokusebenzisanaukunyuselwa kwi-intanethi
Yintoni ukuThengisa ngeXesha nje (i-JITM) kwaye kutheni abathengisi beYamkela?
Ungayiseta njani ishaneli yakho ye-Youtube kwaye uyityumze!